पछुताए मुरलीधर- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक १०, २०७६ सुशील पौडेल
मुरलीधर यतिबेला स्वदेशमा छन्  । एक फिल्म अवार्डका लागि काठमाडौं आएका उनी दसैं मनाउन सिरहाको औरही गाउँपालिकास्थित घर पुगे, ठुल्दाइको हातको टीका लगाउन  ।
मुरलीधर दुई छोरा र पत्नीसहित मुम्बई बस्दै आएका छन् । उनी धेरैपटक नेपाल फर्कन खोजे तर सकेनन् ।
‘दायित्वले मान्छेलाई बाध्य बनाउने रहेछ । जेठो छोरा जन्मेपछि फर्कौं भनेको थिएँ । तर श्रीमतीले मानिनन् । पहिलो बच्चा अप्रेसनबाट जन्मेको थियो । कान्छो छोरो पेटमा थियो । यस्तो अवस्थामा गाउँमा गएर बच्चा जन्माउनु झन् जोखिम हुन सक्छ भनिन् । ठिकैजस्तो लाग्यो । पछि पनि फेरि फर्कन खोजें । श्रीमतीले फेरि बच्चाहरूको पढाइ सकेपछि जाऊला भनिन् । ठिकै हो जस्तो लाग्यो ।’
यतिबेला कान्छो छोराले पनि स्नातक उत्तीर्ण गर्दै छन् । मुरली दायित्वबोधबाट मुक्त हुँदै छन् । भन्छन्, ‘स्वदेश फर्किने कतिचोटि योजना बनाएँ । तर फेल भयो । अब त दायित्वबाट मुक्त भएको छु । बच्चाहरूको पढाइ सकियो । अब यतै फर्किने हो ।’ मुरलीधर गायक, संगीतकार र गीतकार मात्र हैनन्, कलाकार, निर्देशक र निर्माता पनि हुन् । नागरिकतामा मुरली मिझार भए पनि मुरलीधरबाटै आफूलाई चिनाएका उनी स्वदेश फर्किएर नेपाली गीत, संगीत र फिल्म क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छन् । ‘मैले जानेको नै यही दुई चिज हुन्, गाउन र अभिनय । यता आएर शास्त्रीय संगीतको एकेडेमी खोल्न मन छ ।’
कान्छो छोरा जन्मेकै वर्ष मुरलीधरको फिल्मी करिअरले गति लियो । ‘जुन दिन कान्छो जन्मियो, त्यही दिन मैथिली फिल्म ‘सस्ता जिनगी महग सिनूर’ साइन गरें । आधा लगानी समेत गरें । पछि फिल्म सुपर डुपर हिट भईदियो ।’ त्यसपछि मुरलीधरको हिम्मत अलिक बढ्यो । नेपाल फर्किने सपना थाँती नै राखेर संघर्ष अझ बढाए ।
निर्देशन पनि सुरु गरे । तर फेरि जस्ताको तस्तै । ‘कति प्रोजेक्टका निर्माता भागिदिए । कति अड्किए’ बल्खुस्थित आफ्नै बहिनी उर्मिलाको घरमा गफिँदै उनले भने, ‘यतिबेला फेरि एउटा मैथिली फिल्म पाइपलाइनमा छ । निर्माताहरू भेट्न नेपाल नै आएका छन् ।’ मुरलीधर भने अब फर्केर नेपाली फिल्म निर्देशन तथा अभिनय गर्न चाहन्छन् । ‘तर निर्माता पाइरहेको छैन । यो मेरा लागि ड्रिम प्रोजेक्ट पनि हो । यस्तो खालको फिल्म भारतमा समेत बनेको छैन,’ उनी नेपालकै घटनाक्रमलाई लिएर व्यंग्यात्मक हास्य प्रस्तुति र प्रेमकथालाई संयोजन गरी फिल्म बनाउन चाहन्छन् । यसका लागि उनले स्क्रिप्टसमेत तयार पारिसकेको बताए । ‘मेरा फिल्म वा रचना चार तत्त्व प्रेम, युद्ध, अपराध र शंकामा आधारित हुन्छ । संसारदेखि गीत, संगीत, साहित्य, फिल्म सबै सृजना यही चार खम्बामा अडिएको हुन्छ’, उनको मान्यता छ । धेरै विधामा हात हाले पनि मुरलीधरलाई गायन बढी प्रिय लाग्छ । उनी संगीतलाई आफ्नो विरासत भन्न रुचाउँछन् । उनका बुबा नथुनी संगीतज्ञ नै थिए ।
‘मेरा दुई छोराहरू पनि सुरिला छन् । बाबुआमाको संघर्ष देखेर हो वा किन हो, उनीहरूले यसलाई करिअर बनाउन चाहेनन् । सोखका लागि मात्रै गाउँछन्,’ मुरलीधरले थोरै गुनासो पोखिहाले ।
२०४२ साल फागुनमा रिलिज फिल्म ‘सम्झना’ बाट फिल्म क्षेत्रमा कलाकारका रूपमा होमिनुअघि नै मुरलीधर गाउँघरमा नौटंकी गर्दै हिँड्थे । फिल्ममा आएपछि भने उनी खलपात्रमा ख्याति कमाए । तर जति ख्याति कमाए पनि आखिर खलपात्र खलपात्र नै हुँदो रहेछ । मुरलीधरको अनुभव यस्तै छ । भन्छन्, ‘विडम्बना नै यही छ । मान्छेले सुन्दर, रमाइलो र हरियाली मात्र देख्न रुचाउँछ ।
सामन्त, खराब प्रवृत्ति भएको मान्छेलाई फिल्ममै पनि देख्न रुचाउँदैनन् ।’ खलपात्र निर्वाह गर्दाका उनीसँग थुप्रै रमाइला किस्सा छन् । ‘बिग बजेट फिल्म ‘मासुका’ मा मुख्य भिलेनमा थिएँ । त्यो फिल्म आमाले हेर्नुभएछ । हिरोले मलाई खोलामा झ्याँक्दै पिटेको देखेपछि आमा बेहोस हुनुभएछ । पछि फोन गरेर ‘बाबु यस्तो रोल नगर । रोल गर्दै नगर । त्यस्तो मीठो गाउँछस्, बरु गीत नै गा । किन यस्तो नाटक गर्नुपर्‍यो ? नगर’ भन्नुभयो । मैले हस् भनिदिएँ,’ मुरलीधरले हाँस्दै भने, ‘तर मैले मानिनँ । त्यसपछि उहाँले पनि कहिल्यै मेरा फिल्म हेर्नुभएन ।’
तैपनि उनी खलपात्रकै भूमिका किन गरिरहन्छन् त ? मुरलीधर भन्छन्, ‘म खोलाको पानीजस्तै हो । जसले जुन रोलमा बगाउन चाहन्छ, म त्यसैगरी बगिदिन्छु । तर अब भिलेन चरित्र धेरै भयो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । सकारात्मक चरित्रमा पनि खेल्न चाहेको छु । तर के गर्ने ? प्रस्ताव भिलेनमै आउँछ । पर्दामा डरलाग्दो देखिने मुरलीधर वास्तविकतामा मिजासिला र रमाइला छन्, चरित्रभन्दा ठीक विपरीत । भिलेनको चरित्र निर्वाह गर्नु अत्यन्तै कठिन काम ठान्ने उनी त्यस्तो चरित्रलाई दिमागमा हालेर त्यसको हाउभाउ, बोल्ने, लगाउने, खाने शैली, उठबसको तरिका कसैबाट लिएर उतार्नु चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन् । मुरलीधर यतिबेला एउटा तनावमा देखिए ।
उनको रचना, संगीत र गायन रहेको गीत ‘निष्ठुरीलाई माया गरी...’ अर्का गायक राजेशपायल राईले ‘बिनाअनुमति’ रेकर्ड गराइदिएपछि चिन्तित देखिए । कुनै बेला राजेशपायलले भेटका क्रममा गीत राम्रो लागेकाले आफूले पनि गाउन चाहेको बताएपछि मुरलीधरले हुन्छ नि त गाऊ भनेका रहेछन् । ‘त्यो बेला मलाई के थाहा, उनले रेकर्ड नै गर्छन् भनेर,’ मुरलीधरले त्यसपछि पनि राजेशपायललाई उक्त गीत हटाउन धेरैपटक अनुरोध गरेको र उनले पनि हटाउँछु भनेर लामो समयदेखि झुलाएको बताए ।
भने, ‘गीत हटाउनुको सट्टा राजेश भाइले कहिले सिंगापुर, कहिले हङकङ कन्सर्टका लागि लग्छु भनेर लोभ्याउन खोजे । मैले पहिलो सर्त नै गीत हटाउन भनिरहें । मानेनन् ।’ केहीअघि नेपाल आइडलमा समेत राजेशपायलले सोही गीत गाउँदा आफ्नो नामसमेत नलिएपछि मुरलीधरले दिक्क माने । ‘संगीतको त्यत्रो कार्यक्रममा उनले मेरो नाम त लिन्छन् होला भन्ने लागेको थियो । न उनले नाम लिए, न त स्क्रिनमा मेरो नाम नै दिइयो,’ अझ उदेक त मुरलीधरलाई त्यतिबेला लागेछ, जब सोही गीत उनले एक कन्सर्टमा गाउँदा कसैले सुनाएछ, ‘यो गीत त राजेशपायलको हो नि । तर दाइले कस्तो मीठोसँग गाइदिनुभयो ।’ उनले धन्यवाद मात्रै भन्न सके रे ।
‘तर त्यो कुराले मेरो मनमा कस्तो पीर पर्‍यो होला ? एउटी आमाले नौ महिनासम्म गर्भमा राखेर प्रसव गरेर जन्माइहुर्काई ठूलो बनाएको सन्तानलाई अरूले यो फलानोको सन्तान हो भनेर चिन्दै चिनेन भने, आमालाई कस्तो पीर पर्ला ? मलाई त्यस्तै भयो । अब म राजेशलाई के गरुँ ?’ यतिबेला उक्त प्रश्नको उपचार खोजीमा छन् मुरलीधर ।
‘निष्ठुरीलाई माया गरी...’, ‘उडायो सपना सबै हुरीले...’ जस्ता प्रायः गीतमार्फत् मुरलीधर ठूलो उदासी र वेदना पोख्छन् । यी सृजनालाई उनी कुनै बेलाका आफ्नै असफल प्रेमकै उपज मान्छन् । ‘जति पनि स्रष्टा छन्, जे लेख्छन्, आफैं वरिपरिका हुन्छन्, नत्र निस्कनै सक्दैन । मसँग पनि यस्तै भएको हो । त्यसैबाट म सृजनाको ऊर्जा पाउँछु ।’ गीत लेखेपछि पुराना गाँठा परेका सम्झना फुक्दै जाने उनी बताउँछन् । अन्त्यमा बिट मार्दै भने, ‘तर म भाग्यमानी छु, मैले यस्ती श्रीमती पाएँ । जसले हर कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि माफ गरेर सधैं साथ दिइरहेकी छन् । मेरा हरेक रचना उनले ओके भनेपछि मात्रै पारित हुन्छ । उनी मेरो जीवन र सृजना दुवैकी सहयात्री हुन् ।’ प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०८:४४
'हामी गुड लभर'
अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का र निर्देशक एवं अभिनेता निश्चल बस्नेतको जोडीलाई सुरुमा धेरैले 'नसुहाउँदो' भनेका थिए । अहिले भने उनीहरू वास्तविक जीवनमा मात्र नभई पर्दामा समेत जोडीका रूपमा आउँदै छन् ।
कार्तिक ९, २०७६ सुशील पौडेल
स्वस्तिमा खड्का । उमेर २० वर्ष । वर्ण गोह्रो । सहअभिनेत्रीका रुपमा अभिनित फिल्म ‘होस्टेल रिर्टन्स’ भर्खर भर्खर चलेको थियो । निश्चल बस्नेत । उमेर ३४ वर्ष । वर्ण श्याम । ‘लुट’ बाट निर्देशकमा चम्किसकेका उनी ‘उमा’, ‘फिटकिरी’, ‘कबड्डी’, ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’ बाट कलाकारका रूपमा पनि स्थापित भइसकेका थिए ।
स्वस्तिमा र निश्चलले २०७२ फागुन ५ मा विवाह गरेपछि फिल्म क्षेत्रका अधिकांशलाई सरप्राइज नै भयो । धेरैले त्यही बेलादेखि नै भन्न थाले, ‘यो जोडी मिलेकै छैन, छिट्टै छुट्टिन्छ !’ शंका गर्नेहरू स्वस्तिमाले फिल्म खेल्न पाउने स्वार्थमा निश्चललाई रोजेकी र निश्चलले कलकलाउँदी राम्री केटीमा लोभिएको टिप्पणी गर्थे । कतिले त अझै पनि त्यही ठान्लान् । तर, यो जोडी भने वैवाहिक जीवनको चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि आफूहरू अझै हनिमुन पिरियडमै रहेको हासो गर्छन् ।
कुनै बेला विवाहका लागि चर्को दबाब झेलेका निश्चललाई यति बेला सन्तान कहिले जन्माउने भन्ने अर्को दबाब पनि उत्तिकै छ । आखिर उमेर पनि त घर्कंदो छ । झन् त्यसमा पनि घरको एक्लो छोरो । निश्चल भने यी दुई दबाबको मात्राबारे भन्छन्, ‘अगाडि जुन पहाड छ, त्यही ठूलोलाग्दो रहेछ । पछाडी कत्रो पहाड चढियो भन्ने कुराले अर्थ नराख्दो रहेछ ।’
निश्चल, स्वस्तिमा कहिलेदेखि फेसबुक फ्रेन्ड बने दुवैलाई याद छैन । तर निश्चललाई स्वस्तिमाका बारेमा भन्ने र साथी बन्न उक्साउने भने उनकै भतिजी रहिछन् । निश्चलले स्वस्तिमाका कामका बारेमा फाट्टफुट्ट प्रतिक्रिया दिइरहन्थे भने स्वस्तिमालाई पनि निश्चलको कुरा गर्ने शैली र फेसबुकका स्टाटस राम्रा लाग्थे रे । ‘कतिपय निर्देशक, निर्माताहरू नयाँ हिरोइन भन्नेबित्तिकै जसरी बोल्न बहानामा नजिक हुन खोज्नुहुन्थ्यो, उहाँ (निश्चल) त्यस्तो हुनुन्नथ्यो । त्यही कुरा नै मलाई मन पर्थ्यो ।’ त्यसो त ‘कबड्डी’ हेरेपछि भने निश्चल अझ मन परेछ । ‘मान्छे त खासै राम्रो हैन । एक्टिङ पनि ठीकठाकै हो । तर मलाई खै कस्तो मन पर्‍यो,’ स्वस्तिमाले थपिन्, ‘म सिम्पल, जेन्युन मान्छेप्रति छिटो आकर्षित हुन्छु । अनि मभन्दा अलि पाको । स्कुलमा पनि मलाई सिम्पल दाइहरू देख्दा मन पर्थ्यो ।’
त्यसपछि च्याटमा लगातार ३, ४ दिन कुरा भएपछि एक दिन स्वस्तिमालाई निश्चलले म्यासेज गरे, ‘ह्याप्पी बर्थ डे खड्काजी । ट्रिट दिने हैन त ?’ संयोग, स्वस्तिमाको जन्मदिन २–३ दिनमै आउँदै रहेछ । उनलाई निश्चलले हाँसोमा भनेको कुरा साँच्चैजस्तो लागेछ । ट्रिटका लागि हुन्छ भनिदिइन् । ‘त्यसपछि त हाम्रो भेट दिनहुँ हुन थाल्यो । नभेटेको दिन मिस हुन्थ्यो,’ स्वस्तिमाले सुनाइन्, ‘उहाँले त्यस्तो साइडचाहिँ हान्नुहुन्थेन । त्यसैले पनि होला, मलाई उहाँप्रति रेस्पेक्ट थियो । अनि एउटै क्षेत्रमा भएकाले पनि मलाई बिहेपछि यसै क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने पनि लागेको थियो ।’
त्यसो त निश्चललाई पनि स्वस्तिमालाई प्रभावित पार्ने भन्ने दिमागमा आउँदै आएन । ‘हाम्रो कुराको सुरुआत यसलाई म प्रभावित गर्छु र प्रेममा पार्छु भन्ने तरिकाबाट नै भएन । यसै च्याटमा गफ हुँदाहुँदै दुवैलाई रमाइलो लाग्यो । म हत्तपत्त जोकोहीसँग बोलिहाल्न सक्दिनँ । तर उसँग टेक्स्टमा बोल्दा पनि मजा आयो । मान्छे राम्रो लाग्यो । तर पनि योसग बिहे गरौं वा लभ गरौं भन्नेजस्तो दिमागमा आएकै थिएन ।’ विवाहको प्रस्ताव स्वस्तिमाले नै राखिन् । निश्चलले पनि मन पराउने हिन्ट पाएपछि उनले विवाहको प्रस्ताव गरिन् । निश्चलले नमान्ने कुरै थिएन ।
अन्ततः बिहे भयो । सानै उमेरमा बिहे गर्न लागेको कुराले स्वस्तिमाका कतिपय साथीहरू त अचम्मै भए । कतिले चाहिँ बिहेपछि हिरोइनको करिअर सकिन्छ भनेर यति छिट्टै बिहे नगर्न पनि सम्झाए । ‘म आफैंलाई पनि यति छिटो बिहे गर्छु होला भन्ने लागेको थिएन । २७, २८ वर्षमा गर्छु होला भन्ने लाग्थ्यो । मैले भनेको भए उहाँले २, ३ वर्ष अझै कुर्नुहुन्थ्यो होला । तर उहाँकै सजिलोका लागि पनि मैले त्यो गर्न चाहिनँ । मैले नै बिहे गरौं भनेको थिएँ’ स्वस्तिमाले सुनाइन् ।
बिहेपछि निश्चल कहिलेकाहीं एक्लै छँदा साथीभाइहरूसँग गर्ने रमाइलो ‘मिस’ गर्छन् । ‘बिहेपछि आफ्नो जिम्मेवारी अरू कोही भइसकेको हुन्छ भने अरू कसैको जिम्मेवारी आफू बनिसकेको हुँदो रहेछ । एक्लो हुँदाको जस्तो त बिहेपछि हुँदै हुँदैन । त्योबेलाका मज्जा मज्जाको चीजहरू यसो सम्झिइन्छ तर अब त्यही पाराले हिँडेर त चल्दैन,’ निश्चलले फेरि भने, ‘कतिपय कुरा मिस त हुन्छ । तर त्यसले के फरक पर्छ र ? अहिलेको अवस्थामा बानी पर्न मात्रै समय लागिरहेको हो । अब आफ्नो लागि मात्रै सोच्ने दिन गए । मबाट हामी भनेर सोच्न केही समय लाग्ने रहेछ ।’
स्वस्तिमालाई निश्चल पतिका रूपमा भन्दा प्रेमीका रूपमा बढी जमेको लाग्छ । भन्छिन्, ‘हामी गुड हस्बेन्ड एन्ड वाइफभन्दा पनि गुड लभर हो जस्तो लाग्छ । पति–पत्नीको रूपमा हामी त्यो तहमा रेस्पोन्सिबल हुन सकिरहेको छैनौं ।’ यसैले पनि होला, स्वस्तिमा अहिल्यै सन्तान जन्माइहाल्ने पक्षमा छैनन् । ‘सन्तानका लागि जिम्मेवारी लिन सक्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौं, आर्थिक, मानसिक रूपले नै । कम्तीमा ऊ नभएको अवस्थामा पनि म आफैंले पनि जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुपर्‍यो’ स्वस्तिमाको कुरा निश्चलले काट्न त सकेनन् तर ढिलो गरिहाल्ने पक्षमा पनि उनी छैनन् । बच्चा जन्माएपछि करिअर नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने डर सायद स्वस्तिमालाई छ ।
‘यो फेज मैले त अझै इन्जोए गरिरहेको छु । मैले दसवटै बच्चा पाएपनि करिअरका लागि पछि कसैसँग डिपेन्डेन्ट हुन नपरोस् । त्यो ग्यापले मेरो करिअरलाई असर नगर्ने अवस्था होस् । त्यो स्टेजको करिअरमा पुग्नुछ मलाई पहिले,’ स्वस्तिमाको कुरामा निश्चलले भने, ‘हामीले जहिलेसम्म सकिन्छ, यही फिल्डमा नै काम गर्ने हो । हाम्रो जस्तो फिल्म क्षेत्रमा बिहे गरेपछि, बच्चा पाएपछि करिअर नै सकिएको ठानिन्छ तर विदेशतीर बिहे गरोस् कि बच्चा पाओस् कि वा जुनसुकै उमेरकाको पनि सुहाउँदो भूमिका खोजिन्छ । हामीले पनि ती कुरालाई सेट गर्दै लग्नु जरुरी छ ।’
यी दुई पति–पत्नीले पहिलोपटक ठूलोपर्दामासँगै अभिनय गरेको फिल्म ‘घामड शेरे’ प्रर्दशनको क्रममा छ । कलाकारको रूपमा स्वस्तिमाले गत वर्षको फिल्म ‘बुलबुल’ बाट निकै ठूलो प्रशंसा र प्रायः सबैजसो पुरस्कार पाइन् । निश्चलका लागि भने यो एउटा परीक्षा नै हो । किनभने उनी मुख्य हिरो भएको यो नै पहिलो फिल्म हो । यसमा उनीहरू साली–भेनाको जोडीका रूपमा देखिँदै छन् । खोलालाई नै मुद्दा हालिदिने घामड चरित्रको रूपमा निश्चल यो फिल्ममा देखिएका छन् ।
‘लुट’ फिल्म बनाएर नेपाली फिल्मको नक्सा परिवर्तन गर्ने निश्चल र ‘बुलबुल’ बाट नयाँ छिमलमा अभिनयको नयाँ मानक बनाएकी स्वस्तिमाको यो जोडीले पर्दामा कस्तो कमाल गर्छ, हेरौं ।
प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७६ १०:४९